အတှေးအမွငျ – The Only Way To Go!
အဖွဲ့တစ်ခုအတွက် ဦးစီးဦးမှုး ပြုသူကို ခေါင်းဆောင်ဟု ခေါ်သည် ။ ခေါင်းဆောင်သည် အရေးအပါဆုံးသော နေရာတွေ ရှိနေပါသည် ။ ခေါင်းဆောင်မကောင်းလျှင် ထိုအဖွဲ့ ဘယ်လောက်ပဲ အလုပ်လုပ်ပါစေ လမ်းမှားများဖြင့် အကျိုးများလိမ့်မည်မဟုတ် ။ ဒါဟာ သဘောတရား တစ်ခု … နောက် … လူတစ်ယောက်အကြောင်းကို မြင်ကြည့်ပါ ။ လူမှာ ဦးစီးဦးမှုး ပြုသူသည် စိတ်ဖြစ်၏ ။ ထိုစိတ်သည် လူတစ်ယောက်အတွက် အရေးပါဆုံးဖြစ်၏ ။ လူတစ်ယောက်မှာ ထိုဦးစီးတဲ့ စိတ်မကောင်းလျှင် ဘယ်လောက်ပဲ အလုပ်လုပ်ပါစေ .. လမ်းမှားများဖြင့် အကျိုးများလိမ့်မည် မဟုတ် … ။ ဒီတော့ အဖွဲအစည်းနဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ခိုင်းနှိုင်းပြတာပါ ။ အဲ့ဒီ ခိုင်းနှိုင်းမှုအမြင်ပေါ်မှာ .. … More နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
Leaveacomment နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
သင်ရော ဘယ်လိုထင်မြင်သလဲ လူတစ်ယောက်အတွက် သူ့ရဲ့ နေ့စဉ် ဖြတ်သန်းနေစဉ်အတွင်းမှာ .. ကျေနပ်စိတ်ဖြစ်ခြင်း မဖြစ်ခြင်း ဆိုတာတွေ ဖြစ်လေ့ရှိတယ် ။ လူဟာ ………….. တစ်ယောက်ထဲ ရှိနေစဉ် သို့မဟုတ် အများနဲ့ ရှိနေစဉ်တွေမှာကိုယ်ပဲ မိမိလုပ်ရပ်တိုင်းအတွက် အများလက်ခံရင် ကျေနပ်စိတ် ဖြစ်မိတယ် ။ လူဟာ ……… တစ်ယောက်ထဲ ရှိနေစဉ်မှာတောင် ကိုယ်လုပ်နေတာတွေကို တစ်ယောက်ယောက်က ကြည့်နေသလိုမျိုး စိတ်ထဲ ရှိနေတတ်ပြီး ညင်ညင်သာသာ ကျကျနန ပြုမူတတ်တယ် ။ အဲ့ဒီလို ပြုမူလိုက်ပြီးရင်လည်း ကျေနပ်နေတတ်ပြန်တယ် ။ လူဟာ ………. တစ်ခုခုလုပ်နေချိန်မှာ ထိုလုပ်ရပ်ဟာ ကောင်းသည်ဖြစ်စေ မကောင်းသည်ဖြစ်စေ တခြားသူအမြင်ကို ပိုပြီး ဂရုစိုက်တတ်ပြန်တယ် ။ လူဟာ ………… တခြားတစ်ယောက်က မင်းလုပ်တာ … More သင်ရော ဘယ်လိုထင်မြင်သလဲ
8 Comments သင်ရော ဘယ်လိုထင်မြင်သလဲ